Danjire Kay oo ku rajo weyn doorashada Soomaaliya 2016. – idalenews.com
Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya danjire Nicholas Kay ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay inay Soomaaliya ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah marka la gaaro sanadka 2016.
Danjiraha oo wareysi siiyay idaacadda Qaramada Midoobay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya iyo bulshada caalamka ay hor taallo howl muhiim ah si loogu diyaar-garoobo doorashada.
Wuxuu xaqiijiyay in xafiiska siyaasadda Soomaaliya ee Qaramada Midoobay uu dowladda ka caawinayo howlo badan sida; dhismaha maamul-goboleedyada, dhameystirka dastuurka iyo afti u qaadistiisa iyo inay doorashooyinku qabsoomaan xilliga loo qorsheeyay.
Dhinaca kale, wuxuu danjiraha aad u amaanay guulaha la taaban karo ee toddobaadyadii la soo dhaafay ay ciidamada qalabka-sida ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ka gaareen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Wuxuu xusay in lixdii toddobaad ee la soo dhaafay Al-Shabaab lagala wareegay ilaa 11 degmooyin iyo deegaanno ah oo hadda gacanta ugu jira dowladda Soomaaliya, isagoo rajo ka muujiyay inay howlgalladaas sii socon doonaan.
Wasiirka Amniga oo ku baaqay in deg deg loo toogto ragii dillay Marxuumad Nafiso Cismaan Sallaad.